Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ụlọ nkwari akụ New Blossom Houston mepere ụzọ ya
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Blossom Hotel Houston, Houston kacha ọhụrụ okomoko onwunwe, nwere obi ụtọ imeghe taa ka ọbịa na ọha. Dị na 7118 Bertner Avenue na NRG Stadium gbara agbata obi, Texas Medical Center na ebe ntụrụndụ na-ewu ewu, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke oge a na-atụ anya iwebata obodo Houston na ọha na eze ka ukwuu maka ihe eji enyere ndụ aka nke ụwa, nri dị mma, na nzukọ dị elu na oghere mmemme.
Hotellọ oriri na nkwari akụ okomoko kacha ọhụrụ dị nro nke Houston meghere ihe eji enyere ndụ aka, ụlọ ndị ọbịa na suites, ọdọ mmiri dị n'elu ụlọ, yana atụmatụ maka echiche iri nri nke ndị isi nri abụọ nwere kpakpando Michelin na-edu.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ewebata obere oge na-enye oge maka ezumike.
Blossom Hotel Houston nwetara ihe nrite COVID Hero Award maka nkwado o nyere ndị obodo n'oge ọrịa na oke mmiri ozuzo.
"Ka oge na-esiri ike maka obodo anyị na steeti n'ime ọnwa 18 gara aga, anyị nọ Blossom Hotel na Houston nwere obi ụtọ iwepụta ụlọ ahụ n'ihu ọha," Albert Ramirez, onye isi njikwa nke Blossom Hotel Houston kwuru. "Anyị nwere obi ụtọ ịnye ndị obodo ohere ọrụ ma tinye aka n'ịkwalite akụ na ụba obodo niile ma na-enye ndị ọbịa anyị ọmarịcha ọnụnọ ma nwee ntụsara ahụ yana ọrụ na ihe eji enyere ndụ aka."
Blossom Hotel Houston enwetara onyinye nturu ugo COVID Hero n'oge na-adịbeghị anya site n'aka ụlọ ọrụ Azụmahịa Eshia nke Houston maka nkwado ọ na-akwado ndị obodo n'oge ọrịa na oke mmiri ozuzo na mbido afọ. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enwekwa obi ụtọ ịkpọ ya Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Official maka ndị otu Tenis Tenis USA. N'okpuru nkwekọrịta ahụ, uwe ndị otu Tenis Tenis nke mba US ga-egosipụta akara ngosi nke Blossom Hotel Houston.
Blossom Hotel Houston nwekwara obi ụtọ ịkpọsa mmekorita ya na Houston Astronomical Society iji kwado usoro ihe omume kpakpando na nke mbụ ga-eme na Tọzdee, Nọvemba 11 site na 6:30 ruo 8:30 pm Ihe omume "Ụbọchị Lunar", nke na-emeghe maka ndị ọbịa na ndị ọha na eze, ga-eme n'elu ụlọ elu ọdọ mmiri nke ụlọ nkwari akụ ahụ nwere echiche obodo mara mma na ohere na-enweghị ihe mgbochi na mbara igwe abalị. Ihe omume ọdịda ahụ na-amalite usoro ọhụrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ ebe ego a na-enweta ga-erite uru na mgbasa ozi obodo Houston Astronomical Society na mgbalị mmụta.
Site na ebe etiti ya dị nso n'ọgbọ egwuregwu NRG, mpaghara ngosi nka ama ama, ịzụ ahịa, ebe iri nri na ebe ntụrụndụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ ahụ na-anabata ndị ọbịa ka ha chọpụta akara ala ya na-atọ ụtọ yana inwe mmetụta ọhụrụ na ume ọhụrụ na saịtị ahụ nwere ihe eji enyere ndụ aka, ile ọbịa nke ụwa, yana ọmarịcha. iri nri. Na mgbakwunye, dị ka naanị ụlọ oriri na ọṅụṅụ boutique dị nso na ụlọ ọrụ ahụike kacha ukwuu n'ụwa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enye ndị ọbịa ahụmịhe ọbịa dị elu mgbe ha na-aga nhọpụta na usoro dị mkpa.
Ụlọ nkwari akụ ahụ nwere okpukpu 16, nke ga-emeziwanye ọmarịcha ya imeghe na mbido 2022, na-enye ụlọ oriri na ọṅụṅụ 267 mara mma yana ihe karịrị 9,000 square ụkwụ nke nzukọ na-agbanwe agbanwe na oghere mmemme. Ebe a na-ahụ maka mgbatị ahụ dị na saịtị, ebe ọgbara ọhụrụ nke Peloton® mere na-enwe ike ịnweta ndị ọbịa awa 24 kwa ụbọchị, yana ọrụ concierge na-asụ asụsụ dị iche iche nke ga-ezute arịrịọ ndị ọbịa ọ bụla nwere ọkwa ọrụ ahaziri iche nke a na-atụ anya site na kacha mma boutique hotels. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ nwekwara ọmarịcha ọdọ mmiri n'elu ụlọ na ebe ezumike na-etu ọnụ na-ele anya nke ogbe ndịda Houston.
Nhazi nke ụlọ ahụ nwere ọkaibe gụnyere ụdị a nụchara anụcha, ụdị pere mpe nwere palette agba sitere n'ọnwa nke na-egosipụta ọkụ ọkụ dị egwu, ọtụtụ marble Carrera, akwa tray pụrụ iche, ala osisi osimiri na textures mara mma n'ime ụlọ ahụ. Ụlọ ndị ọbịa na ọnụ ụlọ ndị ahụ nwere ebe obibi sara mbara nke nwere ọkụ sitere n'okike ma nwee Wi-Fi ekele, Samsung Smart TV nke kachasị elu, ndị na-ehicha ntutu Dyson, ndị na-eme kọfị Nespresso, akwụkwọ akụkọ dijitalụ nwere PressReader®, yana ụlọ ịsa ahụ mabụ nwere. isi mmiri mmiri ozuzo na ihe eji enyere ndụ aka Aqua Di Parma™ iji gboo ma gafere mkpa azụmahịa, ntụrụndụ na ndị njem lekwasịrị anya ahụike.
N'ịnya isi n'elu 9,000 square ụkwụ nke nzukọ na ohere ihe omume, Blossom Hotel Houston nwere ọkwa mmemme na-arụ ọrụ dị iche iche nke raara nye ọgbakọ azụmahịa nke ọzụzụ na ụlọ ọrụ dị iche iche yana mmemme mmekọrịta. Ụlọ egwuregwu Luna mara mma nke nwere windo ala ruo n'uko nwere ikike audiovisual nke ọgbara ọhụrụ iji nabata nzukọ na ogbako dị mfe ma nwee ike ịnabata ihe ruru mmadụ 250. Ụlọ nkwari akụ ahụ na-enye oghere mmemme itoolu ọzọ nwere nnukwu ọkụ eke na atụmatụ ala na-agbanwe agbanwe. Maka agbamakwụkwọ mbinye aka ejiri nka nka mee, Blossom Hotel Houston nwere ọtụtụ ntọala maka mmemme pụrụiche nke di na nwunye.
Na mbido 2022, Blossom Hotel Houston na-ezube inye ndị ọbịa na ndị obodo echiche iri nri abụọ dị iche iche na mmekorita ya na ndị isi nri abụọ nwere kpakpando Michelin. Ngwongwo ahụ ga-egosipụtakwa ebe ezumike nnabata nnabata nke ga-enye nri nri na nri ihe ọṅụṅụ nke ndị isi nri na-elekọta, yana iri nri n'ime ụlọ maka ndị ọbịa na-enye ma ụgbọ njem mba ụwa na nke America. A ga-ekwupụta nkọwa gbasara mmemme nri na ndị isi nri n'azụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Blossom Hotel Houston dị na 7118 Bertner Avenue na Houston, Texas. Na njikọ na oghere dị nro, ụlọ nkwari akụ ahụ na-ewebata nkwalite ezumike n'etiti ugbu a na Dec 31, 2021. Ndị ọbịa nwere ike ide akwụkwọ ezumike ụlọ ọrụ ezumike na ihe oriri nke onwe site na USD95 maka onye ọ bụla gaa n'ihu. Ndokwa ụlọ dị site na USD289.00 gaa n'ihu gụnyere ebe a na-adọba ụgbọala ekele.
Maka ntinye akwụkwọ na ozi ndị ọzọ na Blossom Hotel Houston, biko gaa na BlossomHouston.com.
Blossom Hotel Houston na-enye ahụmịhe mba ụwa ọhụrụ gbanyere mkpọrọgwụ na Space City. Ụlọ nkwari akụ ahụ na-etinye ndị ọbịa naanị nzọụkwụ site na ụlọ ọrụ ahụike kachasị na ụwa yana azụmahịa na ebe ntụrụndụ kacha elu nke Houston, yana dịka ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha nso na NRG Stadium, ọ dịkwa nso na ebe nkiri Houston na-ewu ewu. Ma na-eme njem maka mkpa ahụike, azụmahịa ma ọ bụ ihe ụtọ, ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ụdị dị iche iche nke Houston, bụ nke a na-egosipụtakwa na ụlọ nkwari akụ nke ụlọ nkwari akụ na mgbọrọgwụ ikuku nke obodo ahụ, mgbe ị na-erite uru nke ụlọ ahịa na-ere ahịa nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ abụọ chef lekwasịrị anya, ihe ndị na-enweghị atụ. na ọrụ, ọnụ ụlọ ndị ọbịa okomoko na ọtụtụ ihe omume na oghere nzukọ. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na BlossomHouston.com, Ma ọ bụ soro anyị na Facebook na Instagram.